EPS Isaphulelo amagwebu uvavanyo ityhubhu itreyi ekwenziweni kunye Factory | Xiong Ewe
Itreyi yegwebu yokuvavanywa kwegwebu ye-EPS
Yasekwa ngo-1998, i-XIONGYE yasungula iseti yokuqala yokuqokelela ityhubhu yokugaya ityhubhu kunye nomgca wokuvelisa ngokuzenzekelayo. Siyaqhubeka nokugxila kwi-EPS yokupakisha amagwebu ngaphezulu kweminyaka engama-20. Ukuba nguMvelisi woMthombo, iXIONGYE ibonelela ngetreyi yokuqokelela ityhubhu yegazi enomgangatho ophezulu kunye nexabiso elifanelekileyo eliye laba lukhetho olukhethiweyo kubaxumi abangaphezulu kwe-100 behlabathi.
I-EPS-ekwabizwa ngokuba yi-polystyrene eyandisiweyo-yimveliso elula yokupakisha eyenziwe nge-polystyrene amaso awandisiweyo. Ngelixa ukukhanya kubunzima kakhulu, bomelele ngokungaqhelekanga kwaye bomelele ngokolwakhiwo, ukubonelela ngempembelelo yokuthintela ukuhlangana kunye nokutshatyalaliswa kukothuka kweemveliso ezahlukeneyo ezenzelwe ukuhambisa. I-foam ye-EPS yenye yezona zinto zibalaseleyo zokupakisha incence zemveli. Ukupakishwa kwe-EPS kusetyenziselwa uninzi lwezemizi-mveliso, iinkonzo zokutya, kunye nezicelo zokwakha, kubandakanya ukupakishwa kokutya, ukuhanjiswa kwezinto ezibuthathaka, ukupakisha ikhompyuter kunye nomabonwakude, kunye nokuhanjiswa kwemveliso kwazo zonke iintlobo.
Itreyi yokuvavanywa kwetyhubhu yenziwe nge-foam emhlophe egudileyo, kwaye inendawo enkulu yokufunxa, ubunzima bokukhanya, ubungqina bomswakama, ubungqina bamanzi, kunye nokusebenza kokukhusela.
Le tray foam ye-EPS isetyenziselwa ukupakisha iityhubhu zokuqokelela igazi, inokuba ilungele umatshini wokupakisha ngokuzenzekelayo wokuhlanganisa iityhubhu zokuqokelela igazi. Isetyenziswa ikakhulu eklinikhi nasesibhedlele.
Umsebenzi wetreyi yovavanyo kukubamba iityhubhu zovavanyo kwaye uzigcine zikhuselekile ngaphandle kokubanjwa ngesandla.
Isicelo: Iityhubhu zeCentrifuge, iityhubhu zokuqokelela igazi ezincamathelayo, iityhubhu zokuqokelela igazi ezingafunekiyo, i-R1.6 ityhubhu yovavanyo, ityhubhu etyhubhu etsobhileyo njl.
Hole ubukhulu Iyafumaneka: 8.4mm, 9.1mm, 12mm, 10mm, 10.8mm, 13.3mm 13mm, 14mm, 14.6mm, 15mm, 16mm
Amaqula angama-50 kunye nemithombo engama-100 zezona zidume kakhulu. Ngaphandle kobukhulu bethu bangoku, ubungakanani obuhleliweyo kunye nesitayile ziyafumaneka nazo! Wamkelekile yophando.
Ngo-195 * 164 * 28
Egqithileyo Iiphakheji ze-EPS Foam
Okulandelayo: Ibhokisi ye-EPS Foam